I-Android N ngamaphuzu ayisihlanu abalulekile | Izindaba zamagajethi
I-Android N ngamaphuzu ayisihlanu abalulekile
Izolo kuqale i- I-Google I / O i-2016, esinye sezigameko ezinkulu ezenzeka namuhla emhlabeni wezobuchwepheshe futhi impela okunye okuvelele kwaba yi isethulo esisemthethweni se-Android N, okumanje asilazi igama layo elichazayo, into ongangenelela kuyo ngendlela enqumayo njengoba siphawulile kule ndatshana.
Le nguqulo entsha ye-Android ibivele itholakala emakethe ukuze ikwazi ukuyihlola nokuyihlola kumadivayisi we-Nexus, kepha singasho ukuthi manje isiyatholakala ngokusemthethweni ngemuva kwesethulo izolo yi-Google. Kulesi sihloko sizobuyekeza izindaba eziyinhloko esingazithola, yize kunjalo, okwamanje futhi ngaphandle kokuthi unedivayisi enophawu lwe-giant search ngeke ukwazi ukuzihlola futhi kuzodingeka ulinde isikhashana ukwenza kanjalo.
I-Android N izungeza amaphuzu ayisihlanu asemqoka esizowabuyekeza manje, silungele ukwazi zonke izindaba nge-Android N?
1 Iwindi eliningi lifika kwi-smartphone yethu
2 Ibha yesaziso igcwele izindaba
3 I-Android N ivikeleke kakhulu
4 Abasebenzisi bazokhetha igama lenguqulo entsha
5 I-Android N izofika ngokusemthethweni ngoSepthemba
Iwindi eliningi lifika kwi-smartphone yethu
Lesi mhlawumbe isici esivelele kunazo zonke se-Android N futhi yize besivele sitholakala kwamanye amadivayisi ngenxa yesoftware yabakhiqizi abahlukene, manje izofinyelela kuwo wonke ama-Smartphones namaphilisi ngendlela yendabuko. Isibonelo, kungasiza kakhulu uma sifuna ukwenza izinto ezimbili ngasikhathi sinye kudivayisi yethu, kusuka bukela ividiyo ku-YouTube bese uphawula ngayo nge-WhatsApp nomngani wakho, noma bhala i-imeyili ngenkathi uthintana nanoma iyiphi idatha esithombeni egcinwe kumtapo wezithombe zakho.
Ngenxa yenguqulo yesilingo ye-Android N noma i-Android 7.0 besengivele sivivinya amafasitela amaningi. Ukuyisebenzisa, kuzofanele uchofoze kunkinobho eyisikwele yalo msebenzi omusha. Okulandelayo kufanele ucindezele bese ubamba uhlelo lokusebenza bese ulihudula. Isicelo osivulile sizohlala phezulu esikrinini, sishiye ingxenye engezansi kwesikrini imahhala ukuze ukwazi ukusebenza kuso nolunye uhlelo lokusebenza.
Ibha yesaziso igcwele izindaba
Ibha yesaziso ingesinye sezici ezisemqoka futhi ezithakazelisa kakhulu ze-Android, futhi ngokufika kwe-Android N ibe nezinguquko eziningana ezibalulekile. Enguqulweni entsha yohlelo olusebenzayo, ngokuslayida kuphela ibha yesaziso sizoyithola izinqamuleli ezinhlanu ezisebenza, ngaphandle kokudonsa ibha futhi, njengoba bekunjalo ngaphambili. Siyabonga i-Google ngokuzwa ukunxusa kwethu futhi ungachithi sikhathi!
Lezi zinqamuleli zingahlelwa futhi zishintshwe, yize kungenzeka ukuthi sizithole ku-Android Stock kuphela futhi ukuthi abakhiqizi abaningi abanezendlalelo zabo zokwenza ngokwezifiso bashintsha kakhulu lezi zinhlobo zezinketho futhi lena inazo zonke izimpawu ongeke uzithande nazo okuningi kubakhiqizi kwesinye isikhathi abathanda ukubheka ngenye indlela futhi bangakunaki ukuthuthuka okwethulwa iGoogle ku-Android, ukwethula okwabo.
Yebo futhi kuzokwazi ukuphendula imiyalezo evela kuzicelo zemiyalezo esheshayo evela kubha uqobo, ukusisindisa enkingeni yokuthi sivule uhlelo lokusebenza. Ngaphezu kwalokho, izaziso, ezivame ukuqoqwa, manje sezizokhonjiswa ngendlela ekhonjisiwe ngomshini omncane nje.
Asifuni ukuvala lesi sigaba ngaphandle kokuma ukukhomba inoveli eyodwa yokugcina futhi lokho ukuthi ku-Android N ekugcineni singalubona ulwazi olumayelana nebhethri kwibha yesaziso. Lokhu yinto abakhiqizi abaningi abebeyifaka kusendlalelo sabo sokwenza ngokwezifiso futhi okuwusizo kakhulu kunoma imuphi umsebenzisi, kepha iGoogle ibinqikaza ukuyifaka. Kule nguqulo entsha yesoftware sizokwazi ukubona amaphesenti ebhethri asele. Ngaphezu kwalokho, ngokuchofoza nje kusithonjana sebhethri singabona igrafu yokusebenzisa futhi ngokuchofoza ku- "Izinketho eziningi" singaya ngqo kuzilungiselelo zebhethri.
I-Android N ivikeleke kakhulu
Abasebenzisi abaningi babheka i-Android njengesistimu yokusebenza engaphephile, ngaphandle kokuhlolwa okuningi kakhulu, kepha futhi ngokuya ngemicimbi ethile iGoogle eye yahlupheka yona iyodwa. Kodwa-ke, kubonakala sengathi i-giant search izimisele ukwenza ngcono ukuphepha kohlelo lwayo lokusebenza yingakho izolo engqungqutheleni yokwethula i-Google I / O 2016 iphikelele kaningi ukuthi i-Android N entsha izovikeleka kakhulu kunanoma iyiphi inguqulo yangaphambilini.
Una ukubethela okusha okususelwa kufayela kuzovumela noma imuphi umsebenzisi ukuthi abethele amafayela ngawodwana, kunokuba abethele yonke idivayisi. Lesi yisinyathelo sokuqala sokuphepha esingezwe yiGoogle okufanele sifake kuso ukuvikelwa okunwetshiwe kohlaka lwe-multimedia olwehlisa inani lezindawo lapho abaduni nazo zonke izinhlobo zezinhloli bangangena ngesinyenyela kudivayisi yethu.
Ukuqeda le nkinga, futhi noma ingenakuhlanganiswa okuningi nezokuphepha, uma ingakuthinta, iGoogle isebenzise ku-Android N ithuba lokuthi kungadingeki ukuthi ilande futhi ifake izibuyekezo zesoftware ngesandla. Lokhu kwenziwa ngemuva futhi ngeke kudingeke silinde nganoma yisiphi isikhathi sokulanda nokufakwa kwezibuyekezo, ukuphela kwento esizodinga ukuyinakekela ukuqala kabusha idivayisi uma kunesidingo. Lokhu kushiya kungekho divayisi ephelelwe yisikhathi futhi ngaphandle kokuthuthuka okufanele kwezokuphepha, okungenye yezinkinga eziningi eziveze inani elikhulu labasebenzisi ekuhlaselweni noma ku-malware.
Abasebenzisi bazokhetha igama lenguqulo entsha
Uhlobo olusha lwe-Android luzobhapathizwa futhi ngegama leswidi Lesi sikhathi sizoqala ngohlamvu N. Abaningi bethu babecabanga ukuthi iGoogle isivele isivalile isivumelwano esithandekayo se-Android 7.0 entsha ezobizwa nge-Android Nutella, kepha kubonakala sengathi lokhu ngeke kube njalo ekugcineni futhi yilokho i-giant search isinike ithuba lokukhetha amagama abo bonke abasebenzisi.
Ngalokhu, kusinikeze ikhasi lewebhu lapho singavotela khona igama esilithandayo noma elikholisa kakhulu. Kubo bonke labo abaphakanyiswayo, okuzophindwa kakhulu kuzoba yilabo abakhethwe yiGoogle ukubhaphathiza i-Android N. entsha manje esemthethweni. Impela, angilazi icala iGoogle elizosenza futhi ukucabanga ukuthi esikhundleni igama elijwayelekile noma elijwayelekile linqoba igama elihlanganisiwe nelinyantisayo, ingabe iGoogle nayo izobhabhadisa inguqulo entsha ye-Android ngalelo gama?
I-Android N izofika ngokusemthethweni ngoSepthemba
Cishe ezinyangeni ezimbili ezedlule abakwaGoogle bakhiphe uhlobo lokuqala lwe-Android N Developer Preview, okwamanje engenzeka ukufaka kwi-Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9, Nexus Player naku-Sony Xperia Z3. Isikhondlakhondla sokusesha sikuqinisekisile ngendlela ecishe isemthethweni ukuthi izokhipha ingqikithi yezithombe ezi-5 zokubuka kuqala ngaphambi kokukhipha inguqulo yokugcina.
Lezi zithombe ezi-5 zizokhishwa kuze kube nguJulayi futhi ngokusho kwesibikezelo inguqulo yokugcina, kanye neNexus entsha, izokhishwa ngoSepthemba. Nayi imephu yomgwaqo yeGoogle ye-Android N;
Hlola kuqala 1 (inguqulo yokuqala, i-alpha), Mashi
Ukubuka kuqala 2 (buyekeza, i-beta), Ephreli
Hlola kuqala i-3 (buyekeza, i-beta), ngoMeyi
Ukubuka kuqala ama-4 (ama-API wokugcina kanye ne-SDK Esemthethweni), ngoJuni
Ukubuka kuqala 5 (isivivinyo sokugcina), Julayi
Inguqulo yokugcina nokukhishwa kwekhodi ye-AOSP nokwethulwa kwe-Nexus entsha
Mayelana ne-Nexus entsha sesivele sazi amahemuhemu amaningana mayelana nokwenziwa okungenzeka yiHuawei yize okwamanje bekungekho ukuvuza okubalulekile okusivumela ukuthi sibone ukwakheka kwesiginali noma sazi izici zayo eziyinhloko nokucaciswa.
Uma unenye yamadivayisi ahambisana ne-Android N nezinguqulo zayo eziyizilingo, ungayifaka njengamanje ngendlela ecishe ibe lula bese uqala ukujabulela ezinye izindaba ezilethwa yinguqulo entsha yohlelo lokusebenza lwe-Google. Ungabuyekeza futhi idivayisi yakho njengoba kukhishwa izithombe ezintsha uze ufinyelele kunguqulo yokugcina necacile ezovele iqukathe zonke izindaba zale nguqulo entsha ye-Androiod.
Sonke esinedivayisi enesistimu yokusebenza ye-Andropid sikulindele ngabomvu ukufika kwe-Android N, ngoba nge-Android Lollipop ukuthuthukiswa kobuhle kufike kanye ne-Android Marsmallow konke lokho kuthuthukiswa kobuchwepheshe obekudingeka, manje ngale nguqulo entsha ye-software yakwaGoogle Kubukeka sengathi yonke into edingwa abasebenzisi izogcina ifikile futhi kade sayifuna.
Ucabangani ngezindaba eziphambili esizobona ku-Android N entsha esevele isemthethweni?. Sitshele umbono wakho esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma ngenye yezingosi zokuxhumana nabantu lapho sikhona nalapho sifisa khona ukuhlanganyela nawe izikhathi ezimnandi, siphikisana ngalesi sihloko nakwabanye abaningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Android N ngamaphuzu ayisihlanu abalulekile
Ingabe yisikhathi esihle sokuthenga i-smartphone ephezulu?
IMoto G4 ne-G4 Plus sezivele zisemthethweni